‘मेरो सरकार’बारे प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, भन्छन् – म भन्न सक्दिन — Sanchar Kendra
‘मेरो सरकार’बारे प्रचण्डले गरे यस्तो खुलासा, भन्छन् – म भन्न सक्दिन
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत शुक्रबार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयो गरिएको ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीप्रति जानकारी नभएको रहस्य खुलेको छ ।
शनिबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रचण्ड स्वयंले यसको खुलासा गरेका हुन् । शनिबार संसदीय दलको औपचारिक बैठक बस्नुअघि सांसदहरुले प्रचण्डसमक्ष यस विषयमा सोधेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको मात्रै बताएनन् आफूलाई दिइएको प्रतिमा ‘मेरो सरकार’ उल्लेख नभएको खुलासा गरे ।
‘मैले राम्रोसँग हेरको हुँ । मैले पढ्दा ‘मेरो सरकार’ थिएन । पछि कहाँबाट घुसाइयो । म भन्न सक्दिनँ’, प्रचण्डले भने । प्रचण्ड बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओली प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले याये संसारभरको प्रचलन भएको भन्दै राष्ट्रपतिको बोलीको बचाउ मात्र गरेनन् यसका विरुद्ध नबोल् सांसदहरुलाई सचेत गराए ।
उनले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि सांसदहरुले यसबारे धारणा राख्न हात उठाए पनि ओलीले समय दिएनन् । ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीप्रति धारणा माग गर्न समय मागेका सांसदहरुलाई ओलीले बोल्न रोकेका हुन् ।
सांसदहरु जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले बोल्न समय माग गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको शब्दावलीमाथि छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
तर, ओलीले ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीको विषयमा बोल्न सांसदहरुलाई रोक लगाइदिएका छन् । शुक्ररबा संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले शनिबार नै संसदीय दलको बैठक बसालेर संशोधन गर्दा गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उसले मेरो सरकारको सट्टटा नेपाल सरकार लेख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गर्ने भएको हो ।
यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास खर्चको गति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष त्यसलाई सुधार्ने बताएका छन् ।
विकास खर्च अत्यन्त न्यून भइरहेका बेला शुक्रबार चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यत्रम सरकारले संसदमा पेस गरेको थियो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको आलोचनात्मक टिप्पणीप्रति पनि आपत्ति जनाए। ‘खोक्रोकहाँ भयो? के भएको भए भरिलो हुन्थ्यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हामी नयाँ प्रणालीमा छौँ, त्यस्तो अवस्थामा विकास, प्रगति र अग्रगतिका लागि सार्थक बहस हुनुपर्छ।’
अन्तरक्रियाका सुरुमा नीति तथा कार्यत्रमले लिएका मुख्य उद्देश्यहरु पाँच मिनेटमा बताएपछि ओलीले पत्रकारहरुलाई प्रश्न गर्न समय दिएका थिए। त्यसपछि उनले एकघण्टा प्रश्नोत्तरमा बिताए। सबै भन्दा बढी उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले गरेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने सम्बोधनको बचाउमा तर्क गरे। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई हेर्दै नहेरी बौद्धिक जमात र सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, सुनतस्करी लगायत, अख्तियारमै रहेकाहरुबाट भएका भ्रष्टाचारका कुराहरु यतिबेला बाहिर निस्किनुमा आफ्नै पहलले सम्भव भएको ओलीको दाबी थियो।
‘३८ क्विन्टलसम्म सुन तस्करी हुँदा चुपचाप बस्ने, प्रश्न नउठाउने अहिले त्यसलाई रोकिदिएपछि ठूला माछा खोई भन्दै हिड्ने?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘ बालुवाटारको जग्गा कसले कुन कुन पालामा हडपेका थिए? अहिले त सरकारले खोजी गरेको हो, त्यही खोजीका कारण यो बाहिर आएको हो।’ उनले राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिनालाई सरकारले नसहने उल्लेख गर्दै कडा कारबाही गरिने बताए।